နုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း – Shwe Canaan
March 4, 2017 Shwe Canaan Uncategorized, ဆောင်းပါး 0
‘ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း’သည်အရာ က ယောရှုခေတ်ကာလ၌ အောင်မြင် မှုအတွက် သော့ချက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် အတွက်လည်း သည်အ ချက်က မှန်ကန်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်းစရာက သည်သော့ချက်ကို လူများအစုက မသိရှိကြခြင်းပင် ဖြစ် သည်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တို့တွေ နုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုပါသည်။ တရားဟောဆရာတွေရဲ့ ဟောကြား ချက်ကိုလည်း နားထောင်ပါသည်။
အတူတကွပင် ဆွေးနွေးကြသေးသည်။ သို့သော်နားထောင် ဖတ်ရှုခဲ့သည့် သမ္မာတရားတွေကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း ပြုကြပါရဲ့လား? မပြုကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ အများစုက ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမည် ဆိုသည်ကိုပင် မသိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း (Meditation)ကို လျစ်လျူရှုမိသည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူတွေ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ နေရခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် ‘ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း’ ဟူသည် ကျွန်တော်တို့တွေ ထင်သည့်အတိုင်း ခက်ခဲနက်နဲ လှသည့်အရာမဟုတ်။ သမ္မာကျမ်းစာက ပြောနေသည့် ‘ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း’ ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို စဉ်းစားခြင်းနှင့် စိတ်ထဲ၌ ရုပ်လုံးဖော်ခြင်း (Visualization) ကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို စိတ်ထဲ၌ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး၊ ၄င်းကျမ်းပိုဒ် ၌ပါရှိသော သမ္မာတရားက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်၌ လုံးဝအုပ်စိုး လွှမ်းခြုံသွားသည် အထိအကြိမ်ကြိမ် ရှုမှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ အကြောင်းမှာ ဤအရာ လောက်အခြား ဘယ်အရာကမျှ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်အတွေးအခေါ်ကို ကွဲပြားခြားနားသွားအောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ အာဗြဟံအကြောင်း တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာကို ဆိုလိုချင်သလဲ ဆိုတာ သင် သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်က အာဗြဟံ (အာဗြံ)အား သားပေးမည်ဟု ကတိပေးသည့်အချိန်၌ အာဗြဟံအသက် အတော်ကြီးနေပြီ။
သူ့မယား စာရဲကလည်း တစ်သက်လုံး အမြုံမ ဖြစ်ပြီး ကလေးမွေးဖွားနိုင်မည့် အသက်အရွယ်ကိုပင် အတော်လေး လွန်လာခဲ့ပြီ။ သည်အဖိုးကြီးနဲ့ အဖွားကြီး လင်မယားနှစ်ယောက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ။ ၄င်းတို့အနေနှင့် အားလုံးလက်မြှောက် အရှုံးပေးလိုက်ပြီ။ ဟုတ်ပါသည်။ သူတို့၏ကျွန် ဒမာသက်မြို့သား ဧလျာဇာကိုပင် သူတို့၏ အမွေခံဖြစ်ဖို့ စီစဉ်ပြီးလေပြီ။ သည်အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနှင့် စာရဲအား သားပေးမည်ဟု ပြောလာသည့်အခါ အာဗြဟံအနေနှင့် ဘယ်လိုမှ သူ့အာရုံထဲ မမြင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်သတင်းစကားက သူ့အတွေးအခေါ်နှင့် လုံးလုံးဆန့်ကျင် နေသည်။
သူ့စိတ်ထဲ သည်လိုရုန်းကန်နေရခြင်းကို ဘုရားသခင် သိတော်မူသည့်အတွက် နုတ်ကတိ တစ်ခု တည်းနှင့် ပြောပြီး ထားခဲ့သည်မဟုတ်။ ကိုယ်တော်ရှင်က တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ ‘အာဗြံ ကို ပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍ မိုးကောင်းကင်ကို မျှော်ကြည့်လော့။ ကြယ်များကို ရေတွက်နိုင်လျှင် ရေတွက်လော့။ သင်၏ အမျိုးအနွယ်သည် ထိုသို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏ …. အာဗြံသည် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ …’ (ကမ္ဘာ၊ ၁၅း ၅-၆)။
ဘုရားရှင်က အာဗြံအား မြုံနေသည့် လူအိုကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ မြင်တွေ့စေဖို့ရန် အလိုမရှိပါ။ သူ့ကတိတော်အတိုင်း ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည့် ပုံရိပ်သစ်ကို စိတ်အာရုံ ထဲ၌ စွဲမှတ်ထင်စေဖို့ရန် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အာဗြံကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီး ကြယ်တွေကို ကြိုးစားပြီး ရေတွက်မိမည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းလက်နေမည့် ကြယ်လေးများကို ရေတွက်ကြည့် နေရင်းနှင့် သူ့သားမြေးမြစ်တို့၏ မျက်နှာလေးများကို မြင်ယောင်မိလိမ့်မည်။ သူ့နှလုံးသား၏ မျက်စိကို ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်တို့နှင့် ဖြည့်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သည့်နောက်ပိုင်း အာဗြံနှင့် စာရဲတို့၊ သူတို့အမြင်တွေေ၀၀ါးသွားသည့်အခါ ဘုရားသခင်က သူတို့ စိတ်ထဲ၌ အမြဲစွဲထင်စေမည့် အရာတစ်ခုကို ထပ်မံလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ၄င်းမှာ သူတို့အား နာမည် အသစ်ဖြင့် မှည့်ခေါ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ – လူမျိုးများစွာတို့၏ အဖ၊ စာရာ – လူမျိုးများစွာ တို့၏ မိခင် ဟူ၍ ဖြစ်သည် (ကမ္ဘာ၊ ၁၇း ၅၊ ၁၅၊ ၁၆)။ ကတိတော်အတိုင်း သူလုပ်ဆောင် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ၄င်းတို့အား အတည်ပြုပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်လို သူတို့တွေ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခေါ်ထူးနေကြခြင်းအားဖြင့် ဘုရားကတိတော်ကို အစဉ်သတိရနေဖို့ဖြစ် သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၄င်းတို့နှင့် ဘုရားကတ်ိတော်စကားသည် ထပ်ချပ်မကွာ အတူရှိလာသည်။ ၄င်းတို့ဘ၀နှင့် ထပ်တူကျည့်အရာ ဖြစ်လာသည်။
သည်အရာကိုပင် ‘ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း’ ဟုခေါ်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် အလွန်ပင်ထူးခြားပြီး တန်ခိုး ပါသောအရာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသော ကတိတော်များကို အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့် အာဗြဟံအသက်တာ၌ အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်လာသကဲ့သို့ သင့်အသက်တာ၌လည်း အံ့သြ ဖွယ် အလုပ်လုပ်လာမည် ဖြစ်သည်။
‘ဘယ်လို! – ဘယ်လို!’ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တစ်ခု ဥပမာပြပါမည်။ သင့်အနေနှင့် ပေးလှူဖို့ ဆန္ဒရှိ သော်လည်း သင့်ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေက ချွတ်ချုံကျနေသည် ဆိုပါစို့။ ၂ကော၊ ၉း ၈ ၌ ပါရှိသော ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပါ။
‘သင်တို့သည် အရာရာ၌ သုံးလောက်သော ဥစ္စာအမျိုးမျိုး အစဉ်ရှိ၍ ကောင်းသောအကျင့် အမျိုးမျိုးနှင့် အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံမည့်အကြောင်း၊ အမျိုးစုံသော မင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့် အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏’။
သည်ကတိတော်ကို ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့ရန် အချိန်ယူပါ။ သင့်အနေနှင့် လိုအပ်နေသူ တစ်စုံတစ်ယောက် အား ချက်လက်မှတ်ပေးနေပုံကို စိတ်ထဲ၌ ရုပ်လုံးဖော်လိုက်ပါ။
ထိုပုံရိပ်အတိုင်း စတင်ပြီး သရုပ်ပြပါ။ ၀ိညာဉ်တော်က ဦးဆောင်သည့်အခါတိုင်း သင်ပေးအပ်နိုင်သမျှ ပေးပါ။ အစပထမတွင် အနည်းငယ် လောက်သာ ဖြစ်မည်။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ။ သင့်အထဲ၌ ၄င်းပုံရိပ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သင့်ကိုယ်သင် ရက်စက်စွာ ပေးကမ်းနေသူတစ်ဦးအဖြစ် မြင်ပါ။ သင့်စိတ်အာရုံ၌ ချက်လက်မှတ် များကို တစ်စောင်ပြီး တစ်စောင် ရေးနေပုံကို အကြိမ်ကြိမ် စွဲမှတ်ထင်စေပါ။
ထိုသို့ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်သည် သင့်အတွက် အမှန်တကယ် ရှုပ်လုံးပေါ်လာပြီး ထင်ရှားလာမည်။ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းလည်း တိုးပွားလာမည် ဖြစ်သည်။
‘ဒီမှာ ညီအစ်ကို ခုပ်လန်း – ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဉ်နေရမယ်လို့ ခင်ဗျား ဆိုလိုတာလား’ ဟုတ်ပါသည်။ သည်အရာကိုပဲ ကျွန်တော် ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်က ဖော်ပြသည့် အရာကို စိတ်ကူးထဲ၌ ပုံဖော်၍ မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်ကူးအာရုံသည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်း သင် သိပြီမဟုတ်လော။ မှုန်ဝါးဝါးမျှော်လင့်ခြင်း လောက်နှင့်သာ သင် အသက်ရှင်နေလျှင် ဘာမှထူးထူးခြားခြား ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ တိကျသေချာပြီး ကြည်လင်ပြတ်သား သည့်ပုံရိပ် သင့်မျက်စိပဲ မြင်လာဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးလှပေသည်။
စိတ်အာရုံထဲ၌ မြင်လာအောင် ရုပ်လုံးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ပထမဆုံး သင်ယူခဲ့ပုံကို ပြောပြချင်သည်။ ထိုအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ကျောင်း ဘောလုံးအသင်း၏ တိုက်စစ် မှူးတစ်ဦး။ တစ်နေ့ ကျွန်တော်အိပ်ယာထဲလှဲနေရင်း စိတ်ထဲ၌ ရုပ်လုံးဖော်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်စိတ် အာရုံထဲ၌ ကျွန်တော်သည် ဘောလုံးကွင်း၏ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်မှာ ရောက်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းနှင့် အခြားပြိုင်ဘက်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစား နေကြသည်။ ဟော – ကျွန်တော်ဆီ ဘောလုံး ရောက်လာပြီ၊ ဂိုးရှေ့ကို ကျွန်တော်ဆွဲသွားပြီ။
တစ်ဖက်အသင်း၏ နောက်တန်းလူများ ဖျက်ထုတ်နေ ကြသည့် ကြားမှာပင် ကျွန်တော် ဘောလုံးကို ကျင်လည်စွာ ထိန်းထားပြီး ဂိုးတိုင်ထဲသို့ ကန်သွင်းလိုက် သည်။ ‘ဂိုး – ဂိုး’ ….. ။ ပရိတ်သတ်က အော်ဟစ်သြဘာပေးကြသည်။ အပိုင် ဂိုး ရသွားပြီ။ သည်ပုံကို ကျွန်တော့်အာရုံထဲ စွဲမှတ်စေရန် အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်တော် လေ့ကျင့်ပါသည်။
ကျွန်တော် သတိပေးပါရစေ။ သည်လို အတွေးပုံရိပ်ကို လေ့ကျင့်ရာ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ခက်ခဲမှု ရှိနိုင် သည်။ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပုံရိပ်ဟောင်းတွေက နှောင့်ယှက်နေသော အချိန်၌ ဖြစ်သည်။
နှစ်အတန်ကြသောအချိန်က ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် အလွန်များနေသည့်အချိန်။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်အတော်များများ ကျွန်တော် ဖတ်ပြီးပြီ။ စာအုပ်အားလုံး လိုလိုကပင် အကြံပြုထားသည်မှာ ‘သင့်ကိုယ်သင် ဆလင်းဘော်ဒီ (သွယ်သွယ်လျလျ ခန္ဓာကိုယ်) အဖြစ် မြင်ပါ’ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်သည်။ မရ။ ကျွန်တော့်မျက်စိကို မှိတ်သည့်အခါတိုင်း ‘၀၀တုတ်တုတ်ခန္ဓာကြီး’ ပဲ မြင်နေသည်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် အမှန်တကယ် လျော့ကျလာသည့်တိုင် ကျွန်တော့် စိတ်အတွင်း၌ မြင်ရသည့်ပုံရိပ်ကြီးက ပြောင်းလဲ သွားခြင်းမရှိ။
သည်လိုနဲ့ပဲ နဂိုခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ပြန်ရောက်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် အစာရှောင်ဆုတောင်းဝင် လိုက်သည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲရှိနေသည့် ပုံရိပ်ဟောင်းကို အောင်မြင်နိုင် သည်အထိ ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်အပေါ်၌ အထပ်ထပ် ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်း လိုက်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ရှိသည့်ပုံရိပ်ဟောင်းကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့ ခက်ခဲရသနည်း။
အကြောင်း မှာ ကျွန်ုပ်တို့က ၄င်းပုံရိပ်ကြီး ကြီးထွားလာဖို့ရန် အချိန်အများကြီးပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သည်ပုံရိပ်ဟောင်းကြီးက ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခပေးပါစေ၊ ကိစ္စမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီး မင်္ဂလာ ကို အမှန်တကယ် အပြည့်အ၀ ခံစားလိုလျှင် သည်ပုံရိပ်ဟောင်းကြီး ပျောက်သွားဖို့အတွက် တစ်ခုခု တော့ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ‘မှားယွင်းသော အတွေးအခေါ်များနှင့် ဘုရားသခင်ကို သိသောပညာကို ဆီးတားသော မာန်မာနစိတ်ရှိသမျှတို့ကို ဖမ်းသွားချုပ်ထားလျှက် ခရစ်တော်၏စကားကို နားထောင် သေရမည်’ ဖြစ်သည် (၂ကော၊ ၁၀း ၅)။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ‘လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကို မဆောင်ဘဲ စိတ် နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ရမည်’ (ရော၊ ၁၂း ၂)။
ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို စိတ်ထဲ၌ ရုပ်လုံးဖော် မြင်ယောင်ခြင်းအကြောင်း ယုံကြည်သူတွေ ကို ကျွန်တော်ပြောပြသည့်အခါ သူတို့က သည်အရာတွေကို အတော်လေး သတိရှိရှိနဲ့ နားထောင်ကြ ပါသည်။ သူတို့က ‘ဒါတွေဟာ အပေါင်းလက္ခဏာ အတွေးအခေါ် (သို့မဟုတ်) သာမာန်ထက် ထူးကဲ တဲ့ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းပဲ’ လို့ သတ်မှတ်ကြသည်။
စာတန်မာရ်နတ်သည် ယောရှုမှတ်စာ၌ ပါရှိသည့် ‘နုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း’ အကြောင်းကို ဖယ်ထုတ်ပြီး လူတွေကို ဆုံးရှုံးခြင်းထဲ ဆွဲချဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ တန်ခိုးအစွမ်း ထက် လှသည့် ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကို လူတွေဆီသွားမှာ သူမလိုလားပါ။ သူသည် သမ္မာတရားကို ခိုးယူထားသည့် သူခိုးဖြစ်သည်။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ – အလွန် အစွမ်းတန်ခိုး ကြီးမားလှသည့် ‘နုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်အောက် မေ့ခြင်း’ အားဖြင့် အနှောက်အယှက် ပေးနေသည့် ပုံရိပ်များအား အနိုင်ယူ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ယောရှု ကဲ့သို့ပင် သင်သည်လည်း အောင်မြင်မှု၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို တွေ့ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
၀န်ခံချက် – ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလထုတ်
Believer’s Voice of Victory စာစောင်မှ ဆရာကြီး Kennet Copeland ၏ ဆောင်းပါးအား မြန်မာ ဘာသာသို့ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။